Lalan’ny Frankôfônia : Hikatona noho ny fanamboarana -
AccueilRaharaham-pirenenaLalan’ny Frankôfônia : Hikatona noho ny fanamboarana
14/07/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tsy tena mbola vita tanteraka ny Lalan’ny Frankôfônia eny Ivandry sy Ankasina. Nosokafana nandraisana sy nampiasaina tamin’iny Fihaonamben’ny Frankôfônia fotsiny ihany izy ireo.
Noho izany, ho fanatsarana ireo lalam-baovao roa ireo, hikatona manomboka ny volana aogositra izao ireo lalana ireo, indrindra ny eny amin’ny “rocade” Ankasina izay tena niasa ho an’ireo mpampiasa lalana mihazo an’Andohatapenaka sy Digue ary Ivato. Toraka izany koa anefa ny lalana miala eo Ivandry mihazo an’Ivato, izay tsy nosokafana ho an’ny besinimaro mihitsy.
Nambaran’ny minisitra eo anivon’ny Prezidansa misahana ny tetikasan’ny Filoham-pirenena sy ny Fanajariana ny Tany ary ny Fampitaovana (M2PATE), Narson Rafidimanana, fa navela ary tsy novitaina tanteraka mihitsy ireo lalana ireo noho ny antony maro. Anisan’izany ny tsy fahatrarana ny fotoana tamin’ny fandraisana ny Fivoriamben’ny Frankôfônia, ny toetr’andro, sns. “Hita fa mety ihany koa anefa ny nanajanonana ny asa mba hahafahan’ilay lalana mifatratra tsara mba tsy hihetsika intsony. Azo antoka fa ho mafy tsara ireo lalana ireo amin’ny fahavitany”, hoy ny minisitra Narson Rafidimanana.
Voalaza ihany koa fa hohatevenina ny tara handrakotra ireo lalana mba haharitra sy hahazaka an-taonany maro. Nohamafisin’ny minisitra ihany koa fa tsy maintsy vitaina mialoha ny vanim-potoan’ny orana ireo lalam-baovao roa ireo.
Ankoatra izay, nambaran’ny minisitra fa ireo orinasa sinoa nandray ny fananganana sy fanamboarana hatramin’ny voalohany ihany no mamita tanteraka ny asa rehetra mahakasika ireo lalam-baovao ireo.
Etsy andaniny, nitondra fanazavana ihany koa ny minisitra amin’ny halatra fitaovana amin’ny lalam-baovao eny Ankasina, izay tapitra misy maka ireo fitaovana mitondra herinaratra manome hazavana amin’ny alina amin’iny lalana iny. Nambarany fa efa misy ny fiaraha-miasa amin’ny Faritra Analamanga sy ny mpitandro filaminana amin’izao fotoana izao. “Tsy handefitra amin’ny fanimbana sy fangalarana fananana iombonana mihitsy izahay. Hosaziana araka ny lalàna ireo izay tratra minia manao izany”, hoy ny minisitra.
“Tsy misy ny teti- bola manokana tahaka ny an’ny polisy sy ny zandary ny tafika Malagasy eo amin’ny fandraisana olona hanatevin-daharana azy ireo, ary ny toerana banga no hafahana indray maka miaramila vaovao” io no ...Tohiny